ओहोरी पार्क | Feel Fukuoka Japan
फुकुओकाको बाहिरि द्रश्य हेर्न चाहाने महानुभावहरु लाई, ओहोरी पार्क लाइ सिफारिस गर्न चाहान्छु । ओहोरी पार्क चाहि फुकुओकाको केन्द्रमा अवस्थीत एक केद्रीय पर्यटक स्थलको रुपमा मानिन्छ । पोखरीले घेरिएको पुलमा आवतजावत गर्न सकिने ठाउँ रहेको छ । पार्कमा बिहान र बेलुका हिडडुल पनि गर्न सकिन्छ । परिवार सग घुमघाम गर्न आउदा पनि निकै राम्रो हुन्छ । जुन Instagram राख्नको लागि एकदम राम्रो ठाँउ रहेको छ ।
ओहोरी पार्क चाहि फुकुओकाको स्थानीय नागरिकहरुको मनोरञ्जन स्थलको रुपमा मानिन्छ । साथै जापानको सुन्दर पानीको दृश्य भएको पार्क रुपमा चिनिन्छ । हरेक वर्षको अगस्ट महिनामा पटका पढ़काइ आतिशबाजी कर्यक्रम सम्पन्न गरिन्छ ।
ओहोरी पार्क चाहि इ.स १९२६ साल बाट इ.स १९२९ मा निर्माण भएको हो । पार्क चाहि चिनिया पार्क हांग्जो शहर चीन को Zhejiang प्रांत मा स्थित पश्चिमी पोखरीको नाममा निर्माण गरिएको हो । ओहोरी पार्कको नाम चाहि फुकुकाको महलको बाह्य आवोरणको रुपमा राखेको थियो । कुरोदा नागामासा फुकुओका को पुरानो भगवानले फुकुओकाको दरवार निर्माण गर्ने बेला , कुसागाए भनिने खाडीको उत्तरी आधा क्षेत्रमा फुकुओकाको दरवारको बाहिरि आवरण निर्माण गरेको थियो ।
पार्कमा दौडने २ किलोमिटरको बाटो रहेको छ । हिड्नको लागि कठिन हुने हुदा, हंस डुङ्गा र स्नोबोर्ड डुङ्गा पनि रहेको छ ।
ओहोरी पार्क भित्र बालबालिकाको लागि पार्क भएको हुनाले परिवार सबै जनाले रमाइलो गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जापानको सस्कृतिमा भिजन चाहानु हुन्छ भने, हजुर हरुको लागि त्यहाँ रहेको जापान पार्क लाइ सिफारिस गर्न चाहन्छु ।
जुन महिना देखि अगस्ट महिना सम्मको पार्क खुल्ने समय अरु दिन भन्दा लामो हुन्छ ।
पार्क भित्र जापानी चिया कक्ष र चिया भवन प्रयोग गरि चियापान कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ ।
ओहोरी पार्क चाहि फुकुओकाको संग्रहालय र फुकुओकाको अमेरिकन राजदूतावास को नजिकै रहेको छ ।
सववे बाट जादा एरपोर्ट लाइन हुदै ओहोरी पार्क स्टेसनमा ओर्लनुहोस् ।
बसमा जाने हो भने कुरोमोन बस स्टप हुदै ओहोरी पार्क स्टेसनमा ओर्लानुहोस । पैदल ५ मिनेट
हाकातामा पुराना शहर परियोजनाको सुरुवात हुदै ! ～हाकाता विभागको आकर्षक र
जापानमा भ्रमणको लागि सरल र उपयोगी शब्दहरु♪
※नेपाली संस्करण तयारीमा छ 福岡県の南に位置する熊本県。その県庁所在地である熊本市は九
※नेपाली संस्करण तयारीमा छ 島国である日本には沢山の離島があります。
※नेपाली संस्करण तयारीमा छ 九州で一番広い面積を誇る大分県の佐伯市。佐伯市は美しい自然
जापानमा ४ सिजन छ , प्रत्येक सिजन अनुसार थरिथरिका फूल देख्न सकिन्छ
फुकुओका यातायातको हिसाबले सहज छ| किनकी यहाँको एयरपोर्ट लगभ
हाकातामा पुराना शहर परियोजनाको सुरुवात हुदै ! ～हाकाता विभागको आकर्षक र मनोरंजन गर्ने क्षेत्रहरु ～
तपाईहरु सबैलाई (हाकातामा पुराना शहर परियोजना) को बारे थाहा छ ?
बार वोक (Bar Walk)फ़ुकुओका २०१५
आफुलाइ मन परेको स्टलमा जान सकिन्छ 『बार वोकु फ़ुकुओका २०१५ 』
सुरक्षित: Uminonakamichi Seaside Park
माफ गर्नुहोला | तयारी गर्दैछौ |